भिडियो – Radio Madi
युवराजको ‘नौट्ङ्की’ भिडियोमा हेर्नुहोस।
कात्तिक ३० । नेपाली गीत संगीतको क्षेत्रमा डेढ दशक पार गरिसकेका लोक तथा दोहोरी गायक एवम सर्जक युवराज आचार्यको पछिल्लो समयमा फेरी अर्को निकै आश लाग्दो गीत "नौटङ्की" सार्वजनिक भएको छ । गीतमा युवराज आचार्य सँगै पूर्णकला बि.सी.को आवाज पाउन…
गजल //वृक्ष काटिन्छ आफू उसले फल्न छोडे……
वृक्ष काटिन्छ आफू उसले फल्न छोडे! बाँच्न दिदैन समाज रङ बदल्न छोडे! अबको यात्रा काँडामा टेकेर हिड्नुछ, ज्यान जोखिममा पर्छ चप्पल नछोडे! मैले म हुनुको अस्तित्व गुमाउनु पर्नेछ, तिम्रो यादमा तड्पिने अम्मल नछोडे! बले जिउँदै मर्छन् निर्दोष…